Niverina Ny Hetsika ‘Vahaolana Amin’ny Herisetra’ Ataon’ny Mpisera Amin’ny Facebook, Sy Ny Adihevitra Momba Ny Politika Hifehezana Ny Herisetra An-Tokantrano Any Trinidad Sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2015 3:10 GMT
Diaben'ny ady amin'ny herisetra an-tokantrano sy fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ny herisetra amin'ny vehivavy, karakarain'ny Fikambanana Any Karaiba momba ny Miralenta sy ny Asa, Trinidad sy Tobago, Novambra 2008. Sary avy amin'ny CWGL, CC 2.0.
Mbola teo indray ry zareo tamin'ny herinandron'ny Zoma 6 Novambra 2015. Ny fiverenana amin'ny hetsika no ataon'ny mponina ho vahaolana amin'ny herisetra amin'ilay fantatra amin'ny hoe ‘Facebook Division’-n'ny mpitandro filaminana any Trinidad sy Tobago — ireo mpisera amin'ny aterineto izay manaparitaka ny ampahany nalaina tamin'ny lahatsary, mandra-pihanak'izany sy mandra-pisian'ny olona mitondra vaovao afaka hanampy amin'ny famantarana ireo tompon'andraikitra.
Tamin'ity indray mandeha ity, lehilahy iray nidaroka vehivavy iray ( heverina fa tamin'ny fantsona vy) tao aminà trano iray fisotroana toaka any atsinanan'i Trinidad no nasehon'ilay lahatsary resahana. Namafisin'ny tatitra fa niaraka tamina zaza izy mivady.
Haingana ny fiasan'ny mpitandro filaminana saingy hatrany am-boalohany dia voasakan'ny tsy fetezan’ ilay vehivavy nilaza ny momba ny zava-niseho izany. Tena sarotra ny fanamelohana amina fiampangana herisetra an-tokantrano any Trinidad sy Tobago : amin'ny ankapobeny, ny mpitandro filaminana irery ihany no afaka mametraka fitarainana raha toa ka milaza am-pahibemaso ilay olona ampijaliana fa niharan'ny herisetra, na raha misy mpitsabo afaka manaporofo ( mazàna amin'ny alàlan'ny taratasy fanamarinan'ny mpitsabo) hoe niaiky ilay olona fa voadaroka. Rehefa tonga any amin'ny fitsarana ny raharaha, dia mahazatra ireo niharam-boina ny mandrava ny fitoriana noho ny tahotra ny valifatin'ireo mpanararaotra azy.
Lalàna efa lany andro manakana ny asan'ny mpitandro filaminana
Tsy gaga tamin'ny fihetsiky ny mpitandro filaminana amin'io tranga io ny mpitoraka bilaogy any ivelany, Jumbie's Watch :
Hitako tamim-pitaintainana fa tsy rototra akory ny mpitandro filaminana tamin'ny nanjo ilay vehivavy voadaroka tao aminà trano fisotroana toaka, voadaka mandra-pitrosony tamin'ny tany tahaka ny baolina vaky.
Lazain'ny mpitandro filaminana fa tsy afaka manenjika ny tompon'antoka amin'ny herisetra ry zareo, araka ny Lalàna Mifehy ny Herisetra an-Tokantrano, raha tsy mametraka fitarainana ilay niharam-boina. Mety ho marina izany raha araka ny lalàna mifehy ny Herisetra An-tokantrano […] Fa na izany aza, nojereko ny famintinana ny Lalàna momba ny Heloka bevava, ary voalaza mazava ao fa ‘ azon'ny niharam-boina na olon-kafa atao amin'ny anaran'ilay niharam-boina ny mametraka fitarainana ‘… Raha adika amin'ny teny hafa izany dia azon'ny mpitandro filaminana na olon-kafa atao ny mametraka fitarainana raha tsy te-hanao ilay niharam-boina.
Lazain'i Jumbie's Watch, izay manery ihany koa ny hanavaozana ireo lalàna sasany efa lany andro, fa :
Misy ny lesona tokony hianaran'ny mpitandro filaminana. Aza mba jamban'ny fijery tokana rehefa lalàna no resahana. Satria ny zava-misy avoitran'ny herisetra an-tokantrano fotsiny dia tsy midika fa tsy afaka ny “ho tia karokaroka” amin'ny resaka lalàna sy miampanga ireo olo-meloka amin'ny lalàna hafa ianao.
Nefa dia izany mihitsy no nataon'ny mpitandro filaminana. Satria maro ireo vavolombelona nanatri-maso ary nisy porofo tamin'ny lahatsary ilay daroka, dia nentina tany amin'ny fitsarana hiatrika ny fiampangana ny herisetra, ny fitànana fitaovam-piadiana ary fitondrantena tsy milamina ilay tompon'antoka, Ricardo Jerome. Nanamafy i Jerome fa ‘tsy meloka’ amin'ny zavatra rehetra.
“Raha toa ka misy heloka bevava miseho any Trinidad sy Tobago ka tsy misy mirakitra izany an-dahatsary, ho nitranga tokoa ve izany ?”
Na eo aza ny fiampangana an'i Jerome, dia mbola tsy matoky ireo mpisera amin'ny aterineto. Nanindrom-paingotra i Square Peg (Lavaka Boribory) :
Raha misy heloka bevava miseho any Trinidad sy Tobago ka tsy misy mirakitra izany an-dahatsary, ho nitranga tokoa ve izany ?
Im-betsaka nanana fotoana nanontaniana ity fanontaniana ity tamin'ny tenako aho herinandro vitsy lasa izay rehefa injay nisy lahatsary nihanaka aorianà lahatsary nihanaka nivoaka nandrisika ny mpitandro filaminana hiasa haingana tsy toy ny mahazatra.
Avy eo tonga ny lahatsarin'ilay vehivavy nodarohanà lehilahy iray tamin'ny habibiana tao amin'ny trano iray fisotroana toaka any Arima.
Tahaka ireo lahatsary hafa rehetra, dia niparitaka malaky tao amin'ny Facebook ity iray ity, voavaky avy hatrany eo amin'ny fàham-baovaoko ary nahatonga hatezerana. Nahatohina ny olona ny fahitàna ity lehilahy manipy vehivavy amin'ny tany, mandaka ary midaroka azy amin'ny zavatra vita amin'ny vy ity. Naniry hahitàna ilay lehilahy ny olona ary tian'izy ireo omena rariny ity vehivavy mahantra ity.
Farafahakeliny, maro amin'izy ireo no tahaka izany. Ny sasany aza moa dia efa matoky fa tsy hiaraka hiasa amin'ny fanadihadiana izy, hiverina any amin'ny mpampijaly azy, ary tsy misy dikany ireny feo sy hatezerana rehetra ireny.
Nolazain'ilay mpitoraka bilaogy fa “hafahafa ihany ny mampitondra enta-mavesatra ny niharam-boina iray izay mazàna no tsy afaka hilanja izany”, nampiany hoe :
Tsy maintsy ovaina io, ary tsy amin'ny heviny araka ny lalàna fotsiny. Ity olana ity dia efa tena miparitaka be sy latsa-paka lalina amin'ny fiarahamonintsika. Io no toerana izay matetika mbola handraisana ny vehivavy ho toy ny fananan'ny vadiny, heverina fa mifanaraka amin'ny fenitra hoe ny lehilahy no loham-pianakaviana ary mazàna omen-tsiny noho ny heloka bevava atao amin'izy ireo. Jereo fotsiny ny fihetsika mahery atao amin'ny vehivavy amin'izao rehefa nandà ny tsy hiaraka hiasa izy.
“Omena tsiny ny niharan-doza “
Nampirongatra ny hatezeran'ireo maro mpisera amin'ny aterineto ny fanaratsiana goavana natao tamin'ilay niharan'ny fanafihana, izay avy amin'ny loharanom-baovao tsy nampoizina ny sasany, isan'izany ny mpisolovava an'i Ricardo Jerome, izay nilaza ilay zava-misy hoe “zavatra tsy toy inona akory”. Nanoratra tao amin'ny Facebook i Jacqueline Scott :
Fantatro fa tsy maintsy manao ny asany sy miaro ireo olona arovany ny mpisolovava fa ny hilaza ity ho zavatra tsy toy inona akory ?? Namaky ny fanehoankevitry ny maro ao amin'ny haino aman-jery sosialy aho ary tezitra tamin'ny fanaovana tsinontsinona sy ny fanararaotana atao amin'io vehivavy voadaroka io ….
Tena tiany izany. .
Tsy maintsy tiaviny ny fitaovana sy ny solo-hoho omeny azy.
Nahoana izy no hiala ?
Tadiaviny izany, izy no miaro azy.
Manome anay sombim-pahitana ny amin'ny fiarahamonina mahery setra hisy anay ity lahatsary ity sy ireo maro hafa naseho tato ho ato tao amin'ny haino aman-jery sosialy.
Nanomboka oviana no nekena ny mandaka sy midaroka olona hafa ? Tsy mahaliana ahy izay nataon'ity vehivavy ity.
Mamoky olona tezitra, olona mahery setra isika ary rehefa mpisolovava no manivaiva am-pahibemaso ny lahatsary mahatezitra tahaka itony….dia malaky ho lasa fiarahamonina very isika.
Tsy ninoan'i Patricia Worrell, mpisera amin'ny Facebook, ny fanehoan-kevitra reny momba ilay daroka :
Ny fanehoankevitry ny lehilahy momba ny fidarohana vady :
“Fa avy eo indray, tsy maintsy hahita ny tsy ampoizinao ianao. Fantatrao ihany ny ataony !
Satria mazava ho azy – azo hamarinina ny daroka !
Nomarihan'ny namana mpisera ao amin'ny Facebook, Rhoda Bharath, fa ” raha araka ny lalàna misy aty aminay dia zara raha mahita vonjy amin'ny tranganà herisetra an-tokantrano ny vehivavy ; mainka moa fa fiarovana avy amin'ireo sampan-draharaham-panjakàna” – akon'ny fihetsehampon'ny mpiasa vavy sy ny fikambanana miaro ny zon'ny ankizy ary ny bilaogy Square Peg (Lavaka Boribory), izay niteny hoe :
Mora ny mijery ity lahatsary ity sy ny manontany hoe ahoana no ahazakàny izany, fa izay tokony hanontaniantsika dia ny hoe : aiza no tokony ho alehany ? Aiza no misy fialofana izay afaka mandray ny vehivavy sy ny zanany sady miaro azy ireo amin'ny mpanao herisetra ? Aiza ireo mpiaro ara-dalàna hanome antoka fa azony ( ny vehivavy ) atao ny mitazona ny zanany raha toa ka mety hihevitra ny hiady ralehilahy ? Aiza ny torohevitra hanampy azy hahita fa tsy fitiavana izao iainany izao ?
Alohan'ny zavatra rehetra, aiza ireo lalàna mamela ny mpitandro filaminana hanao ny asany ? Ananany daholo ny porofo rehetra ilainy momba ny daroka sy ny tohiny nefa raha mbola tsy misy ny fanambarana avy amin'ilay vehivavy izay inoana fa matahotra ny valifatin'ny mpampahory azy, tsy afaka manao na inona na inona ry zareo mandra-pahafatin'ny kapoka azy. Amin'izay fotoana izay, hihivingivin-doha isika rehetra sady hingonongonona momba ny fomba tokony nialàny fony nisy hirika.
Mandritra izany fotoana izany dia miditra aminà fihodinana iray hafa isika, amin'ny fanamelohana ny olona ampahoriana (‘ tsy maintsy tia-mahita izany izy) sy ny ratsy ( “zava-mitranga eo aminà olon-dehibe roa nifanaiky…’) ary na aiza na aiza, na oviana na oviana ireo mpanao herisetra manerana ny firenena dia mahatsiaro fa sahy hatrany manozongozona ny hazany. Satria, tsy mampaninona ny hoe hatraiza ny daroka nanjo azy ireo, tsy niharan-bono izy ireny raha tsy afaka hijoro sy hiteny momba ho niharan'izany.